Iimveliso zethu zithandwa kakhulu elizwini, njengaseMzantsi Melika, eAfrika, eAsia njalo njalo. Iinkampani "zenze iimveliso zodidi lokuqala" njengenjongo, kwaye zizama ukubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu, ukubonelela ngenkonzo esemgangathweni emva kokuthengisa kunye nenkxaso yezobuchwephesha, kunye nokuxhamla abathengi, ukwenza ikhondo lomsebenzi kunye nekamva!
Bonke abasebenzi bethu bakholelwa ukuba: Umgangatho uyakha namhlanje kwaye inkonzo idala ikamva. Siyazi ukuba umgangatho olungileyo kunye nenkonzo engcono kuphela kwendlela yethu yokufikelela kubathengi bethu kunye nokufezekisa nathi. Samkela abathengi kulo lonke igama ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane beshishini kwixa elizayo. Iimveliso zethu zezona zilungileyo. Nje ukuba ukhethwe, ugqibelele ngonaphakade!
1.Yenziwe nge-100% ye-carbide powder eyintombi, ukumelana nokunxiba okugqwesileyo kunye nobulukhuni;
2. Ukusebenza okuphezulu kwe-CVD / PVD ukutyabeka, kunye nomphezulu onzima kunye nomphezulu ogudileyo;
3. Kwenziwe uhlolo lwama-200%, phantsi kwe-ISO9001: inkqubo yolawulo lomgangatho ka-2008;
4. Uyilo lobuchwephesha lobuchwephesha, lubonelela ngokusika ngokugqibeleleyo;
5. Ubungakanani obuchanekileyo, ukuchaneka okuphezulu;
6. Ubomi besixhobo esisebenza ngokude nesingaguquguqukiyo;
I-TDC2 / 3/4 / 5 BP…
I-TDC2 / 3/4 / 5 I-BPG20B
I-TDC2 / 3/4 / 5 BU810
I-TDC2 / 3/4 / 5 I-PP
Ukudibanisa iipropati zamaBakala Amagqabantshintshi
IBakala Ulwahlulo lwe-ISO Umbala Cebisa ngeSicelo
BPGO5B M05-M15 Umbala o-cyan-grey mnyama Ngobulukhuni obuphezulu obuphezulu kunye ne-resistanceto efanelekileyo yokuguqulwa kweplastiki. Ifanelekile ukusika ngesantya esiphezulu kunye nenkqubo yokugqiba yensimbi engenasici engenanto. Icinyiwe kunye nekhabhoni yentsimbi.
I-BPG20B M10-M30P10-20 Umbala o-cyan-grey mnyama I-PVD yambethe i-car-carbide.Use for varity yentsimbi engenasiphelo egqiba ukusika kwisantya esiphantsi ukusika isantya. Xa ufuna ubungqongqo obunamandla kunye nomgangatho ophezulu womphezulu.ukubonelela ngokusika ngokugqibeleleyo.Ukuphinda ubambe umothuko ophezulu.
Egqithileyo CNC Metal Ukusebenza Ifaka APMT1135PDER-H2
Okulandelayo: I-HRC55 Solid Carbide Twist Drill (5D)